महामारीबाट बच्न कृषि: पूर्व कानुनमन्त्री तथा सांसद शेर ब. तामाङ - सारा खबर
महामारीबाट बच्न कृषि: पूर्व कानुनमन्त्री तथा सांसद शेर ब. तामाङ
“हुलमुलमा जिउ जोगाउनु, अनिकालमा बिउ जोगाउनु” हाम्रो पुर्खाहरुले जानेबुझिकनै अनुभवको आधारमा यो कहावत बनाए । अहिले हामी जिउ र बिउ दुबै जोगाउनु पर्ने अवस्थामा पुगेका छौं । कोरोनाको महामारी एकदुई हप्तामा जानपनि सक्छ, एकदुई महिन जानपनि सक्छ वा एकदुई वर्ष रहन पनि सक्छ । यसैभन्न सकिने अवस्था छैन । यस्तो बेला आत्तिनु पनि हुँदैन, डराउनु पनि हुँदैन । यो बेला आएको विपत्तिलाई सामना गर्ने बाहेक हामिसंग अरु कुनै विकल्प बाँकी छैन । तसर्थ अहिले हाम्रा पुर्खाले भने जस्तै जिउ र बिउ जोगाउने समय हो ।
मानव वा कुनै जीव बाँच्नको लागी प्रकृतिमा उत्पादन हुने वनस्पति र त्यसवाट उत्पादन हुने अन्नपात नै हो ।
मानिस बाँच्ने कृषिको अरु कुनै बिकल्प छैन । दिनभर सुनको बिस्कुट बेच्ने साहुले खाना खाँदा सुनको बिस्कुट खाँदैन बाँच्न पिठोको नै बिस्कुट खानु पर्छ । दिनभर सिमेन्ट बेच्ने पसलेले भरे ढिडो खाना एक किलो सिमेन्ट पोको पार त भनेर सहयोगीलाई पक्कै भन्दैन, बरु उसले ढिंडो खान त अन्नको नै पिठो चाहिन्छ । हिरामोती, सुन, पैसा, घर, गाडी, हवाईजहाज, पानीजहाज, भाँडावर्तन, लात्ताकपडा, औषधि यी सबै मानव समुदायले आफु बाँच्न सजिलोको लागी बनाईएका साधनहरु हुन ।
मानवसंग बाँच्नको लागी खाने वस्तु र बाँच्नको लागी सजिलो बनाउने साधन गरी दुइथरीमात्र बस्तु छन । बाँच्नको लागी सजिलो बनाउने साधन विविध माध्यमबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ तर बाँच्नको लागी खाने बस्तु केवल कृषिवाट मात्र पाउन सम्भव छ । तसर्थ यो महामारीको बेला प्रमुख काम भनेको बाँच्नको लागी चाहिने अन्नवालीको संरक्षण र उत्पादन नै हो ।
पहिलो त बाँचौं त्यसपछि अरु सबै कुरा हुनेछ । अहिले त कोरोनाको महामारीवाट बाँच्न मानिसहरु भाग्दैछन, तर हामीले खाने कृषि उत्पादनमा ध्यान दिएनौं भने नेपाली जनतालाई खाना पुग्ने खाद्यान्न मुस्किलले आधी वर्षाभन्दा बढी छैन । अहिले नै खेती सुरु गर्‍यौंभने अर्को ४,५ महिनामा नयाँ अन्न पाउन सक्छौं । कोरोनाको प्रभाव विश्वब्यापी भएकोले अरुले उत्पादन गरेको आयात गरेर खाउँला भन्ने समय अब हामीलाई छैन । तसर्थ अब हाम्रो नेपाली कृषिको पुन:जगरण अनिवार्य छ । यो लकडाउनको समयमा पनि नेपाली कृषिलाई कसरी पुन:जागरण गर्न सकिन्छ ? सरकार र सबै सम्बन्धित निकायको ध्यान जावस । विश्वमा जस्तोसुकै महामारी फैलिएपनी कृषिमा बलियो भएको मुलुकलाई केहि हुँदैन ।
अरु सबै अर्थतन्त्रको जग बनावटी हुन्छ । यस्तो महामारीमा ती सबै ध्वस्त हुन्छ । तर कृषि अर्थतन्त्र सानो भएपनी त्यो मजबुत र टिकाउ हुन्छ । कुनैबेला कृषि उत्पादन निर्यात गर्ने हामी अहिले आयातमा भर परेका छौं । यो कोरोनाको महामारी लामो समय रह्योभने हामीले नसोचेको अकल्पनीय परिस्थिति पनि आउन सक्दछ । तसर्थ यसबाट बच्न कृषि बाहेक हामीसंग अरु कुनै बिकल्प छैन ।
अहिले नयाँ बाली लगाउने समय हो । प्रत्येक किसानलाई सम्मान गरौं । छिटोभन्दा छिटो नयाँ बाली लगाउन प्रोत्साहन गरौं । शहर छोडेर गाउँ पसेका सबैले बाँझो खेत आवाद गर्न थालौं । केहि न केहि गरौं कमसेकम आफुलाई चाहिने खाद्यान्न आफैं उत्पादन गरौं । कोरोनाको प्रभाव लामो समय रह्यो भने !? हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौं । राष्ट्र र जनतालाई दीर्घकालीन रुपमा आत्मनिर्भर बनाउने उपाय नै कृषि हो ।
अघिल्लो लेखमारसुवागढी र तातोपानी नाकाबाट मालसामान आयात निर्यात गर्ने
अर्को लेखमाशरीरमा प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन कस्ताे खानेकुरा खाने
तीन विदेशी कम्पनीकाे प्रस्तावः नेपालमा रासायनिक मलकाे कारखाना खाेल्न
सय दिनको प्रगतीविवरण सुनाउदै गर्दा बाढी पीडितकाे समस्या सम्बाेधन भएन
नमोबुद्ध नगरपालिका वडा नं.५ का किसानलाई कृषि सामाग्री वितरण